China egweri Steel Shot factory na-emepụta | Feng Erda
Nlereanya / Nha:0.4-2.5mm
Alloy egweri ígwè shot dabere na elu-carbon ígwè shot, obere-carbon ígwè shot, na ala vanadium ígwè shot, n'ịtụle kearu-adịghị ike nke n'elu ngwaahịa: ikuku onu, cracks, ekweghị ekwe dị iche, ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa site reaserch na ibe ya bụrụ teknụzụ, ọ nwere ike họrọ dị iche iche ihe dị ka dị iche iche ojiji, ya na-eri na-adabere na ngwa ebe, ike ogologo ojiji ndụ, ya nwere elu na-eri arụmọrụ. stel ịkpụ waya gbaa dị na atọ dị iche iche ekweghị ekwe: 45-50 HRC , 50-55 HRC na 55-60 HRC nwere nha sitere na 0.20mm ruo 2.50mm. Ihe nkedo anyi gbuputara na SAE J441, AMS 2431 na VDFI 8001.
Isi ike: HRC40-50
ỌBAA G1 Ọnọdụ
G2 Ọnọdụ abụọ
Martensite ma ọ bụ troosite ma ọ bụ pearlite rụrụ arụ
Udi di iche-iche, nkpuchi zuru oke, udi obi uto
Ntak-ahọrọ Alloy egweri Shot?
Egweri shot cross ngalaba
Steel shot cross ngalaba
Egweri Shot Raw Materials
Steel Shot Raw Akụrụngwa
， ， Ọ na-nke esorowo ígwè waya, ọ dịghị ikuku oghere, cracks, na ekweghị ekwe dị iche.
， ， Dịka ihe dị iche iche a chọrọ maka mpaghara dị iche iche si dị, anyị nwere ike ịhọrọ ihe dị iche iche nke waya nchara.
③ ， Igwe ọgbụgba ahụ na-akawanye ntachi obi, ndụ ya dịkwa okpukpu 1.5 karịa nchara nchara.
Na workpiece kpochara site egweri shot bụ ọlaọcha na-acha ọcha, na n'elu kpochara site Cast ígwè shot amama ọchịchịrị isi awọ.
， Nhicha nhicha dị ọcha karịa nke nkedo nchara, ọ dịghịkwa mkpa nhicha nke abụọ. Mgbe nhicha, na ike ike nke workpiece osobo chọrọ.
， ， N'ihi uru nke enweghị oghere ikuku, enweghị mgbawa, na ọ dịghị mfe ka agbaji ya na abrasive forging steel shot, ego njuputa na usoro ọgbụgba ọkụ na-erughị, ájá na usoro ọgbụgba ọkụ na-erughị, ọrụ ike ọrụ dị obere , na mmetọ gburugburu ebe obibi nwere ike belata.
Tụnyere nke Uru
Egweri ígwè shot
Nnukwu ogbugba carbon
18mg / ㎡
Osote: Iburu Angular Steel Grit
Alloy egweri Steel Shot
Egweri steels gbara Suppliers